Madaafiic Hoobiyeyaal ah ayaa maanta kusoo dhacay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Madaafiic Hoobiyeyaal ah ayaa maanta kusoo dhacay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya.
Wararka ay heshay Goobjoog ayaa waxay sheegayaan in madaafiicdan ay ahaayeen illaa Shan, waxaana qaarkood ay ku dhaceen gudaha Villa Soomaaliya.
Qaar kale oo madaafiicdan ah ayaa ku dhacay xaafado ku dhow Villa Soomaaliya, lamana oga illaa iyo hadda khasaaraha nafeed ee ka dhashay madaafiicdan.
Sidoo kale, mid ka mid ah madaafiicdan ayaa la sheegay inuu ku dhacay xarunta wasaradda Ganacsiga iyo Warshadaha oo ku taalla dhabarka dambe ee Tiyaatarka qaranka.
Ciidamada ammaanka ayaa ku baxay meelaha lagu tuhunsan yahay in madaafiicdan laga soo tuuray.
Magaalada Muqdisho ayuaa waxaa kusoo badanaya falalka amni darri, xilli ciidanka dowladda ay wadaan howlgallo ballaaran oo ammaanka lagu sugayo.
Previous Wasiirka cusub ee wasaarada Waxbarashada Puntland oo Garowe lagu soodhaweeyay
Next Madaxweynayaasha Somaliland Iyo Soomaaliya Oo La Filayo Inay Kulmaan Iyo Sweden & Djibouti Oo Tartan Ugu Jira Inay Martigeliyaan Kulanka Biixi Iyo Farmaajo